पूरा भयो धुर्मुसको सपना
रौतहट माघ, २३ । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रौतहटको सन्तपुरमा निर्माण गरेको एकीकृत नमूना बस्ती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) को पहलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका– ८ सन्तपुरमा बाढी प्रभावित मुसहर एवं दलितका
५ नं प्रदेशका पहिलो वैठकका ३ निर्णय, फागुन २ गते सभामुख चयन गर्ने
भैरहवा २१, माघ । प्रदेश नम्बर ५ को पहिलो संसद बैठकले सभामुख चयन सहित २ ओटा निर्णय गरेर सम्पन्न भएको छ । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको हलमा बसेको बैठकले संसदीय कार्यबिधि, सभाध्यक्षको समिति र सभामुख चयनको मिति तोकेको छ । सभामुखको निर्वाचन फागुन २ गतेलाई तोकेको छ । रुपन्देहीका जेष्ठ सदस्य ७९ वर्षीय बलदेव
किन परेनन् कमल थापा सुष्माको भेट सूचीमा
काठमाडौं १९, माघ । भारती विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भेट सूचीमा उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापा परेनन् । सरकारका वरिष्ठ मन्त्री समेत रहेका थापासँग स्वराजको भेटवार्ता भएन् । भारतीय नाकाबन्दीका बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्र मन्त्री रहेका थापा स्वराजसँग व्यक्तिगर
पशुपति क्याम्पस ३८ औं वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं १९, माघ । पशुपति बहुमुखी क्याम्पस आजबाट ३८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ३८ औं वार्षिकोत्सव शुक्रबार क्याम्पस प्राङ्गणमा सरस्वतीको पूजा÷अर्चना गरेर मनाइयो । सो अवसरमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, क्याम्पस प्रमुख प्रयागराज भट्टराई,पूर्व क्याम्पस प्रमुख विष्णुप्रसाद पन्त र संस्थापक चन्द्रप्रसाद
नयाँ सरकारलाई भारतको सद्भावः प्रचण्ड
काठमाडौं १९, माघ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘ले भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वाराजले नयाँ बन्ने सरकारलाई भारतले सघाउन विश्वस व्यक्त गरेका बताएका छन् । स्वराजसँग भएको भेटबारे पत्रकारलाई जानकारी दिँदै प्रचण्डले नयाँ सरकारप्रति भारतको सद्भाव भएको सन्देश उहाँले सुनाएको बताएका
सुष्मा स्वराज काठमाडौंमा ,भ्रमणमा हतारोःपरराष्ट्रविद्
काठमाडौँ १८,माघ । भारतका विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालको दुईदिने भ्रमणमँ बिहीवार अपराह्न काठमाडौं आइपुगेकी छन् । विशेष विमानबाट आएकी स्वराजले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासँग छुट्टा–छुट्टै भेटने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उनले
२७ गते सभामुखको चयन, छिटो सरकार गठन गर्न सांसदको माग
हेटौंडा १८, माघ । ३ नं प्रदेश संसदको पहिलो बैठक हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ । बैठकले सभामुखको निर्वाचन यहि माघ २७ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदमा विचार राख्ने सांसदहरुले सरकार छिट्टै गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सबैभन्दा वढी ११० सांसद भएको प्रदेशसभा बैठकमा छिटो सरकार गठन गरेर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति
कार्यपालिका प्रमुखबाटै डा.गोविन्द केसीका वकीललाई ज्यानमार्ने धम्की
काठमाडौं १७, माघ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले ज्यानमार्ने धम्की दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सुरक्षा माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजूरी दर्ता गएका छन् । डा. गोविन्द केसीको पक्षमा सर्वोच्चमा बहस गरेको आधारमा प्रतिशोध लिएर बहस सकिना साथ पुस २६ गते र गत बिहीबार
काठमाडौँ, माघ १६ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शहीद पार्कमा पुगी शहीदहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुभएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमूख विद्यासुन्दर शाक्यको संयोजकत्वमा शहीद सप्ताह मूल समारोह समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा लौनचौरमा रहेको शहीद पार्कमा पुगी ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति
४ करोड २९ लाख बिगोसहित चूडामणि शर्माविरुद्ध अर्को मुद्धा
काठमाडौं १५, माघ । निलम्बित आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक तथा तत्कालीन कर फस्र्यौट आयोगका सदस्य सचिव चूडामणि शर्माविरुद्ध अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ करोड बढीको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । ्अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमवार विशेष
मुख्यमन्त्री भागबन्डामा कुरा मिलेन, माओवादीलाई २ मुख्यमन्त्री दिन नसकिने
काठमाडौं १४, माघ । ६ प्रदेशमा बहुमत प्राप्त बाम गठबन्धनलाई पद बाँडफाँटमा समस्या देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले २ ओटा मुख्यमन्त्री र ४ प्रदेशमा सभामुख मागेपछि एमाले नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सिट सङ्ख्याको आधारमा पद भागवन्डा गर्नुपर्ने दावी गरेका छन् । सबै पदको भागवन्डा प्याकेजमा गर्न वाम गठबन्धनको
झापा जाँदै गरेको टाटासुमो धनुषामा दुर्घटना ६ जना मृत्यु ४ घाइते
जनकपुरधाम १३, माघ । काठमाडौंबाट झापा जाँदै गरेको टाटा सुमो धनुषामा दुर्घटना हुँदा चालकसहित ६ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा ४ जना घाइते भएका छन् । बा ९ च ३३१४ नम्बरको टाटासोमु तीब्र गतिमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका पोर्ताहास्थित कमदला नदीको पुल नजिक राति २ः३०
प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभा पहिलो बैठक २१ गते आह्वान
धनगढी ११, माघ । प्रदेश ७ को पहिलो बैठक माघ २१ गते आह्वान गरिएको छ । प्रदेश नं ७ का प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २१ गतेका लागि आह्वान गरेका हुन् । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेको सभा हलमा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने गरी २१ गते दिउँसो १ बजे आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुख सचिवालयले बताएको
फेसबुकमा कोमल ओलीको विरोध,उता ओली सासंद बन्ने पक्का
दाङ १०, माघ । सामाजिक सञ्जालमा गायिका कोमल ओलीलाई पार्टीले राष्ट्रियसभा सासंद बनाउन ऐमाले कार्यकर्ताले विरोध गरिरहँदा ओली भने सासंद बन्ने पक्का भएकी छन् । बुधबार उम्मेदवारी दर्ताको दिन प्रदेश ५ बाट निर्वाचित हुने महिलाको ३ सिटमा ३ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेपछि ओली सहित उनीहरु निर्विरोध भएका
एकाबिहानै पानी ? , कारण यस्तो छ
किन पर्यो एकाबिहानै पानी ? , कारण यस्तो छ काठमाण्डौँ लगायतका स्थानको मौसममा एक्कासी परिवर्तन आएको छ । यतिबेला काठमाण्डौँ लगायतका केही स्थानमा सामान्य वर्षात् भएपछि चीसो ह्वात्तै बढेको छ । मौसम विभागले आज सामान्यतया दिनभरी आकाशमा बादल रहने र केही स्थानमा पानी पर्ने संभावना रहेको पनि पूर्वानुमान गरेको
देशका अधिकांश भूभागमा वर्षा : कतै हिउँ, कतै असिना
काठमाडौं : देशका अधिकांश भूभागमा बिहानैदेखि हल्का वर्षा भइरहेको छ। कतिपय जिल्लामा हिउँ तथा वर्षासँगै असिना परेको प्रारम्भिक सूचना आएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसम विज्ञ विभूति पोखरेलका अनुसार यो वर्षा अन्त्यसँगै तापक्रम बिस्तारै बढ्नेछ। 'अब एक दुई दिनपछि
वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने मधेशवादी दलको संकेत
काठमाडौं ९,माघ । ‘जता शक्ति उतै भक्ति’ भने झैं मदेशवादी दल राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनसँग मिल्न सकारात्मक देखिएका छन् । एमालेलाई मधेशी विरोधीको आरोप लगाउने उनीहरु बहुमत पाएपछि नजिएका हुन् । मंगलबार एमालेसँग भएको वैठकमा मदेशवादी राष्ट्रियसभा र सरकार गठनमा सहकार्य गर्न सकारात्क भएको एमाले
काठमाडौं ८, माघ । निर्वाचन आयोगले माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । कार्यतालिका अनुसार आइतबार सात ओटै प्रदेशमा रहेका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशित गरेको छ । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी मतदाता (निर्वाचक मण्डल) प्रदेश नं २ मा र सबैभन्दा
को–को बन्दैछन् सशस्त्रमा एआईजी
काठमाडौं ७, माघ । सशस्त्र प्रहरी वलको एआईजीका लागि गृह मन्त्रालयले ५ जना डिआइजीको नाम सिफारिसमा गरेको छ । बढुवा सिफारिस समितिले आइतबार ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । बढुवा सिफारिसमा हुनेमा जानकीराज भट्टराई, सुबोध अधिकारी, निराकार विक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठ रहेका छन्। बढुवामा परेका डिआइजीको
प्रदेश सभा सदस्यको सपथ ग्रहणः इश्वरको नाममा कि जनताको
काठमाडौं ७ माघ । प्रदेश प्रमुखहरूले प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गराएका छन्। तर, प्रदेश नं ७ का प्रमुख गाडीबाट गएकाले अहिले २ बजे मात्र सपथ कार्यक्रम हुने छ । १, २, ३, ४, ५ र ६ प्रदेशमा सपथग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सम्बन्धित प्रदेशहरूको अस्थायी कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूमा सपथग्रहण
प्रदेश प्रमुखको शपथ अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति निवासमा
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउनु हुनेछ । राष्ट्रपति निवासमा बुधबार अपराह्न ४ बजे आयोजना हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रपतिबाट नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले शपथ लिनु हुने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतबाट थाहा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको
राजधानी माग्दै नव निर्वाचिन सांसद सडकमा
काठमाडौं ४, माघ । सरकारले लामो रस्साकसी गरेर ७ ओटा प्रदेशको अस्थायी सदरमुकाम तोके लगत्तै देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन सुरु भएको छ । आन्दोलनको नेतृत्व राष्ट्रिय स्तरका नेता देखि निर्वाचित सांसदहरुले गरेका छन् । सरकारले बुधबार प्रदेश नं १ को विराटनगर, २ को जनकपुर,३ को हेटौडा, ४ को पोखरा, ५ को रुपन्देही (बुटवल),६
तोकिए प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी
काठमाडौं ३, माघ, सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको छ । बुधबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सात वटै प्रदेशको केन्द्र र प्रदेश प्रमुख तोकेको हो । कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले जनाए अनुसार प्रदेश नम्बर १ को केन्द्र विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को
अस्थायी राजधानी तोक्न सहमति जुटने, मन्त्रिपरिषद्को वैठक ३ बजे बस्ने
काठमाडौं ३,माघ । सत्तासिन नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीको मत बाझिएपछि मन्त्रिपरिषद्को वैठक स्थगित भएको छ । प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा करिब–करिब सहमति भएपनि राजधानी तोक्नेमा विवाद भएको एक मन्त्रीले बताए । बिहान साढे १० देखि सुरु भएको मन्त्रिपरिषद् बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको हो । सरकार निर्णयमा पुग्न
एमाले अध्यक्ष ओली बिहीबार स्वदेश फर्कने
काठमाडौं २,माघ । नियमित नियमित स्वास्थ्य उपचारका क्रममा थाइल्याण्डको बैंककमा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार स्वदेश फर्कने भएका छन् । गत पुस २६ मा त्यसतर्फ गएका उनि मंगलवार आउने कार्यक्रम रहेकामा दुई दिन थप भई यही माघ ४ गते फर्कने उनका सञ्चार संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री
मन्त्रिपरिषद्को बैठक भोलि ९ बजे
काठमाडौं २, माघ । प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी सदरमुकाम तोक्न आज (मंगलबार) बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद्को वैठक स्थगित भएको छ । दलहरुबीच थप परामशृ गर्नु पर्ने भएकाले वैठक सारिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम
काठमाडौँ, २ माघ । आज माघ २ गते । विगत वर्षझैँ यस वर्ष पनि भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ । वि.सं. १९९० को महाभूकम्प र त्यसबाट पुगेको जनधनको क्षतिको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा भूकम्पका कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न जनचेतना फैलाउने र सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्ने उद्देश्यले २०५५ सालदेखि माघ २ गतेलाई
संखुवासभामा जिप दुर्घटना,मकालु गाउँपालिका वडाध्यक्षसहित ५ को मृत्यु
खाँदबारी । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा जिप दुर्घटना हुँदा वडाध्यक्षसहित ५ जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार दुर्घटनामा मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको सहित ५ जनाको मृत्यु भएपनि सबैको शनाखत भएको छैन । हालसम्म कटुवाल र सुरेश राईको मात्र सनाखत भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका
डा. केसीलाई जुत्ता सिलाउने मोचीले खुवाए जुस
काठमाडौँ २९,पुस । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको डिन पुनःवहालीलाई लिएर सोमबारदेखि अनसनमा बसेका प्राडा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । शुक्रबार साँझ सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएसँगै शनिबार विहान पत्रकार सम्मेलन गरी उनले अनसन तोडेका हुन् । डा. केसीले २५ वर्षदेखि अस्पतालको गेटमा जुत्ता सिलाउँदै आएका नथुनिया
बारले डा.केसीलाई भन्यो न्यायपालिकामाथि दवाव नदिइयोस्
काठमाडौं २८, पुस, । कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा ढिला गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बारले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बचाउ गर्दै अनसन बसेर न्यायालयमाथि दबाव नदिन आग्रह गरेको छ । डा. केसीको अनसन, अदालतको अवहेलना मुद्दा र सर्वोच्चको आदेशबारे